प्रदेश १ सरकारको दुई वर्ष : यस्ता छन् उपलब्धी ! - Shikhar Post Shikhar Post
प्रदेश १ सरकारको दुई वर्ष : यस्ता छन् उपलब्धी !
विराटनगर । प्रदेश १ सरकार गठन भएको २ वर्ष पूरा भएको छ । दुई बर्ष पूरा भएको अवसरमा प्रदेश १ सरकारले आफ्नो कामको समीक्षा गदै सरकारको दुई वर्षे कार्यकाललाई उपलब्धीपूर्ण मानेको छ । उसले संघीयता कार्यान्वयसँगै प्रदेशको विकासका लागि गरिएको कामलाई उल्लेखनीय उपलब्धीको रुपमा प्रदेश सरकारले सफलता ठानेको छ।
प्रदेश सरकारले शनिबार दोश्रो बार्षिकोत्सव कार्यक्रम आयोजना गरी २ वर्षको अवधिमा भएका उपलब्धी सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सरकारको उपलब्धी सार्वजनिक गर्दै २ वर्ष धेरै उपलब्धीमुलक रहेको दाबी गरे ।
उनले प्रदेश सरकारले प्रदेशको राजधानी तोक्ने कामलाई पहिलो उपलब्धी मानेको छन । त्यसैगरी दुई वर्षको समयमा प्रदेशमा थिति बसाल्नेदेखि विकास निर्माणमा पनि उतिकै मात्रमा काम भएकाले त्यसलाई पनि आफुले सफलताको रुपमा लिएको बताए ।
मुख्यमन्त्री राईले सुरुमा काम गर्न कानुनी बाटो नहुँदा समस्या भएको त्यसैगरी संरचना, कर्मचारीको व्यवस्थापन लगायतका कारण सुरुवाती चरणमा काम गर्न धेरै व्यवधान आएको स्मरण समेत गरे ।
प्रदेश सरकारले आफनो नीति तथा कार्यक्रम अनुसार दुई वर्षको अवधिमा निजी क्षेत्र र विकास साझेदारहरुलाई प्रदेश एकको विकासका लागि लागानी गर्न तयार रहेको कुराले पनि सरकारको कामले प्रमाणित गरेको दाबी गरे ।
उनले सरकार गठन भएको दुई वर्ष आधार तयार गर्ने वर्ष मात्र नरहेको भन्दै यो अवधिमा सरकारले विकासको खाका तयार पारेको र सोही अनुसार पूर्वाधार तर्फ २७ किलोमिटिर कालो पत्रे सडक, १ सय २९ किलोमिटिर सडक ग्राभेल, १० वटा मोटरेवल पुल र १५ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको जानकारी दिए ।
त्यसैगरी प्रत्येक प्रादेशिक निर्माचन क्षेत्रमा ६२ वटा बहुवर्षीय सडक, ७७ वटा मुख्यमन्त्री ग्रामिण सडक, १ सय २६ वटा मोटरेवल पुल र १ सय १४ वटा झोलुङ्गे पुलको निर्माण भइरहेको बताए ।
प्रदेशको खेतीयोग्य जग्गामा सिँचाई पुर्‍याउन १ सय २९ वटा योजनाहरु सम्पन्न् भएको र ६ सय ३१ व्टा योजनाहरु निर्माणधिन अवस्थामा रहेको मुख्यमन्त्री शेरधन रार्ईले जानकारी दिए । उनले खानेपानी तर्फ १ सय १० आयोजना सम्पन्न भएको र ९ सय ४९ वटा आयोजना निर्माणधिन रहेको बताए ।
त्यसैगरी जनता आवास कार्यक्रम अन्तरगत विपन्न परिवारलाई आवासको उपलब्ध गराउन १ सय ७१ व्टा घर निर्माणको कबम भइरहेको विवरण प्रस्तुत गरे ।
उनले यो अवधिमा प्रादेशिक प्राविधिक तथा व्यवासायीक विश्वविद्यालय र प्रदेश सरकारका मातहतको ट्रमा सेन्टरसहितको प्रादेशिक अस्पताल बनाउने कार्यपनि अघि बढेको बताए ।
उनले प्रदेश सरकारले मुख्यतय सात प्रदेश मध्ये प्रदेश १ सरकार पहिलो विदेशी सहायता पाउने प्रदेश भएकाले दुर्य बर्षको समयमा भएको सबै भन्दा बढी महत्वपूर्ण उपलब्धीका रुपमा लिएको छ ।
स्विट्जरल्यान्ड सरकारले ‘प्रदेश सहयोग कार्यक्रम’अन्तर्गत १ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग दिएको थियो ।प्रदेश सरकारका दुई वर्षका मुख्य उपलब्धिमा ३९ वटा कानून निर्माणलाई पनि मानिएको छ ।
अहिलेको ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख रुपैयाँको बजेट कार्यन्वयनमा छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अपेक्षाकृत बजेट खर्च गर्न नसकेको सरकारले यो आर्थिक वर्षको ७ महिनामा २७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएकोमा यसलाई समेत प्रदेश सरकारले आफनो उपलब्धीका रुपमा लिएको छ ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन भई १ नं प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र,२०७६/७७ र २०८०/८१ सार्वजनिक गरी सोही अनुसार योजनाको दस्तावेज तर्जुमा कार्य भएकोमा पनि त्यसलाई पनि उसले उपलब्धी मानेको छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोग,लगानी बोर्ड गठन लाई पनि सरकारले दुई वर्षे समयको आफनो उपलब्धीका रुपमा चित्रण गरेको छ ।
कार्यक्रममा १ नं प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले संविधानको मर्म र भावना अनुसार प्रादेशिक विकासका लागि प्रदेश सरकारले बनाएको योजना अनुसार अगाडि बढन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
उनले संविधानको मर्म र भावना अनुसार संघीयता कार्यान्वयप्रतिको प्रदेश सरकारको दायित्वप्रति सधै अडिग भएर प्रदेशिक विकासमा लाग्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह समेत गरे।
कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मन्त्री, त्यसैगरी प्रदेशसभा सदस्य, प्रदेशका मन्त्रालयका सचिव, प्रतिपक्ष दलका नेता संवैधानिक आयोगका प्रमुख, प्रदेशका प्रहरी प्रमुख लगायत कर्मचारी सर्वसाधारणलगातको सहभागिता रहेको थिया ।
प्रकाशित मिति : शनिबार, ३ फाल्गुन २०७६ १४:०२